ကမ္ဘာတစ်လွှား ထူးထူးခြားခြား နှစ်ကူးပွဲတော်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကမ္ဘာတစ်လွှား ထူးထူးခြားခြား နှစ်ကူးပွဲတော်များ
ကမ္ဘာတစ်လွှား ထူးထူးခြားခြား နှစ်ကူးပွဲတော်များ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jan 2, 2014 in Arts & Humanities | 11 comments
Denmark – ပန်းကန်တွေ ခွဲ
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက လူအများဟာဆိုရင် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် အထိ အသုံးမလိုတော့တဲ့ ပန်းကန်ပြားတွေကို စုဆောင်းထားတတ်ကြပါတယ်။ နှစ်ကူးပြီဆိုတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အိမ်တံခါးကို အဲ့ဒီပန်းကန်တွေနဲ့ ရိုက်ခွဲတော့တာပါပဲ။
Ecuador – စက္ကူမီးရှို့
အီးကွေဒေါ က လူတွေဟာဆိုရင် နှစ်သစ်ကူးည သန်းခေါင်ယံအချိန်မှာ စက္ကူတွေကို မီးရှို့ခြင်းနဲ့ နှစ်သစ်ပွဲ ဆင်နွှဲတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း နှစ်ဟောင်းက ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း မီးရှို့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာဆိုရင် အနာဂါတ်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အတွက်ပါတဲ့။
Spain – စပျစ်သီး ၁၂ လုံးစား
စပိန်နိုင်ငံက လူတွေမှာတော့ နှစ်ကူးညမှာ စပျစ်သီး ၁၂ လုံးကို ပါးစပ်ထဲ တစ်ခါတည်း သိပ်ထည့်ပြီး စားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီလို တစ်ခါတည်း စားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် လာမယ့်နှစ်ဟာ ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ စောင့်ကြိုနေပါလိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
Estonia – အလျှံပယ် စားခြင်း
Estonia နိုင်ငံမှာဆိုရင် နှစ်ကူးမှာ ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ အလျှံပယ် စားသောက်တတ်ကြပါသတဲ့။ ခုနစ်ခါ စားသောက်ကြတယ်ဆိုပဲ။
Scotland – ပထမဆုံး ခြေလှမ်း
စကော့တလန် နိုင်ငံမှာတော့ နှစ်ကူးဆို အိမ်တံခါးဝမှာ အတားအဆီးလေး တစ်ခု လုပ်ထားတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီ အတားအဆီးကို ပထမဆုံး ကျော်ဝင်လာတဲ့ လူဟာဆိုရင် နှစ်သစ်မှာ ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင်တွေကို သယ်ဆောင်လာသူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်လားတော့ မသိဘူး။
Panama – ပုံတူရုပ်အား မီးရှို့ခြင်း
ပနားမားနိုင်ငံက လူတွေကတော့ နှစ်သစ်မှာဆိုရင် ထင်ရှားကျော်ကြားသူတို့ရဲ့ ပုံတူ ရုပ်တုတွေ လုပ်ပြီး မီးရှို့တတ်ကြပါသတဲ့။ ဒါကလည်း နှစ်သစ်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ စတင်ဖို့အတွက်ပါတဲ့။
Finland – သတ္တုသွန်းလောင်းခြင်း
ဖင်လန်နိုင်ငံက လူတွေကတော့ဖြင့် အပေါက်လေးတွေထဲ သတ္တုတွေ သွန်းလောင်းချပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပုံစံကို နိမိတ်ဖတ်လို့ နှစ်သစ်ကို အတိတ်ကောက်တတ်ကြပါသတဲ့။
Siberia – အေးခဲနေသော သစ်လုံးများ
Siberia နိုင်ငံက လူများကတော့ဖြင့် နှစ်သစ်မှာဆိုရင် သစ်လုံးကြီးတွေ သယ်ဆောင်ပြီး အေးခဲနေတဲ့ ရေထဲကို ခုန်ချတတ်ကြပါသတဲ့။
South Africa – ပရိဘောဂများ လွှင့်ပစ်ခြင်း
တောင်အာဖရိက ဒေသတစ်ချို့မှာရှိတဲ့ လူတွေဟာဆိုရင် နှစ်သစ်မှာ မိမိတို့ အိမ်တွင်းက အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများကို ပြတင်းပေါက်ကနေပြီး လွှင့်ပစ်ကြလေ့ ရှိပါသတဲ့။
Ireland – ပေါင်မုန့်စွမ်းအင်
အိုင်ယာလန်မှာ နေတဲ့ လူများကတော့ဖြင့် နှစ်သစ်မှာ ဘာလုပ်တတ်ကြတုန်းဆိုရင် သူတို့အိမ် နံရံများကို ပေါင်မုန့်များနဲ့ ရိုက်ခတ်ပြီး မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ပထုတ်တတ်ကြပါသတဲ့။
Chile – သင်္ချိုင်းထဲမှာ အိပ်
ချီလီနိုင်ငံက လူများကတော့ဖြင့် နှစ်ကူးညမှာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ချစ်သောသူများ အိပ်စက်အနားယူသွားကြတဲ့ သင်္ချိုင်းများမှာ ညအိပ်တတ်ကြပါသတဲ့။
ဒေါက်တာ ဆယ်ထပ်ကွမ်းရ ..
အံချာဒုံး နီကကော ဘိုလိုနှစ်ကူးသဒုန်း။
ဒီတစ်ခါတော့ဒီဂျီးဒေါ်နောက်က လိုက်တာကောင်းမယ်
Estonia ကို သွားမယ်…..
ဟိုဒင်းကို အကျပန လှန်၊ သဘာဝ လေညှင်းတွေကို တစ်ဝကြီး ရှူရှိုက်ရင်းနဲ့
အာဋာလ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးအောက်မှာ လွတ်လပ်စွာ အင်းအင်းပါတတ်ပါတယ် … ငိငိငိ
အေးအေး … သန်းခရု
@ ကေဇက်၊ မာဃ
အက်စတိုးနီးယား … အက်စတိုးနီးယား …
ချီလီ လို့ရော အော်ဂျင်ဘူးလား
လမ်းပေါ်က ခွေးကို ပိတ်ကန်တယ်လည်း ပြောသေးတယ်
ဘယ်မှ မသွားရဘူးလည်း ပြောသေးတယ်
နင် ဂေါက်နေတာပဲ ဖြစ်ရမယ် … အဟွတ်
အခုတော့ ဖဲ မရိုက်တော့ဘူးပေါ့ …
ယားရင်တောင် ကုတ်အားလောက်ဘူး ထင်ဘာဒယ် …
ဒရာမာ ဇာတ်ကား ကြည့်တာတော့ ပါဘူးပေါ့နော် … ငိငိငိ
ရဲစခန်း နဲ့ ဆေးရုံမှာ
chile ကလူတွေလုပ်တဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲကို သဘောကျတယ်….
နောက်နှစ်ကျရင် ကျနော်လည်း အဲ့လိုလုပ်မယ်….
မမ KZ ဘက်က တစ်မဲပါတယ်ဂျို့ Estonia Estonia Estonia Estonia Estonia
ရမ်းဖြီးကျွန်းပြန် အံချာဒုံး လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်တီးနောက်တဲ့ရေးခြင်းပါပဲ